सिभिल बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (मङ्गलवार, १२ भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी सिभिल बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (मङ्गलवार, १२ भदौ २०७५)
on: १२ भाद्र २०७५, मंगलवार ०९:१७ लगानी
सिभिल बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (मङ्गलवार, १२ भदौ २०७५)
सिभिल बैङ्कले गत आव २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्ममा रू. ६४ करोड ५० लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ८५ प्रतिशत बढी हो । बैङ्कले अघिल्लो आवमा रू. ३४ करोड ८२ लाख नाफा कमाएको थियो । चौथो त्रैमाससम्ममा बैङ्कले रू. ६५ करोड १९ लाख खराब कर्जा उठाउन सफल भएकाले र खुद ब्याज आम्दानी तथा सञ्चालन नाफा बढेकाले नाफा बढेको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी ३४ प्रतिशत बढेर रू. ८ अर्ब पुगेको छ । बैङ्कले १० बराबर ४ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्नुका साथै र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत भएको आव २०७३/७४ मुनाफाबाट प्रस्तावित १० दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपश्चात् चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब पुगेको हो । बैङ्कले रिजर्भ कोषमा रू. १ अर्ब ४० करोड छुट्याएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा ९२ प्रतिशत बढी हो । बैङ्कले निष्क्रिय कर्जाको असुलीमा पहल गर्दै आएको छ । यसैको फलस्वरूप निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तमा निष्क्रिय कर्जा ३ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेकोमा असार मसान्तसम्ममा २ दशमलव ६५ प्रतिशत छ ।
बैङ्कको चौथो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ वर्षबीच तुलना गर्दा :
असार मसान्तसम्ममा बैङ्कले रू. ४० अर्ब १ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने रू. ३९ अर्ब ४६ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा निक्षेप १६ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ३३ प्रतिशत बढी हो । असार मसान्तसम्ममा बैङ्कले वैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. १६ करोड ९१ लाख आम्दानी गरेको छ । यो अम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा ७० प्रतिशत बढी हो ।
बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी रू. १ अर्ब ३७ करोड, कर्मचारी खर्च रू. ४६ करोड १९ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. ४३ करोड ४३ लाख र सञ्चालन नाफा रू. ४४ करोड १० लाख छ । अघिल्लो आवको तुलनामा खुद ब्याज आम्दानी २२ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ३ सय १८ प्रतिशत वृद्धि हो ।
बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति ६ प्रतिशत बढेर रू. २९ करोड ५९ लाख र अन्य सम्पत्ति ६५ प्रतिशत बढेर रू. १ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा रू. ४७ करोड २६ लाख छुट्याएको छ । साथै, बैङ्कले पुराना कर्जाका साथै नयाँ कर्जाको गुणस्तर बढाउन नयाँ कर्जा प्रवाहमा सूक्ष्म विश्लेषणसहित विशेष नियन्त्रणको रणनीति अपनाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार हालसम्ममा १३ ओटा दुर्गम स्थानीय निकायमा शाखा खोलिसकेको छ भने केही शाखा खुल्ने क्रममा छन् । भौतिक पूर्वाधारलगायत अभावका कारण शाखा खोल्न ढिलाइ भएको बैङ्कले प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
बैङ्कको असार मसान्तसम्ममा तरलता अनुपात २३ दशमलव ०६ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी रू. ११ दशमलव २२, मूल्य आम्दानी अनुपात १३ दशमलव ६४ गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ६३ दशमलव ७० छ । आइतवारको शेयरमूल्य नेटवर्थभन्दा कम छ । यस दिन बैङ्कको शेयरमूल्य रू. १ सय ३६ मा बन्द भएको छ ।
डिभिडेण्ड इल्ड रेशियो : प्रतिशेयर लाभांश (गतवर्ष)/प्रतिशेयर बजार मूल्य × १००
बैङ्कको अर्निङ पावर रेशियो : कर तिरेपछिको नाफा/कुल सम्पत्ति
अर्निङ यिल्ड रेशियो : प्रतिशेयर आम्दानी/प्रतिशेयर बजार मूल्य × १००
खरीद चाप : बैङ्कको आइतवार भएको कारोबारको अन्तिम समयसम्म विक्री चापभन्दा खरीद चाप साढे १ गुणा बढी थियो । सो समयसम्म २२ हजार ९९ कित्ता शेयर खरीद र १३ हजार ८ सय ८२ कित्ता विक्री गर्ने माग थियो ।
मैनबत्ती विश्लेषण : बैङ्कको ६२ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ओपनिङ कालो मारोबोजु आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य आगामी दिनमा घट्ने सङ्केत गर्छ ।
आरएसआई : बैङ्कको ६२ दिनको कारोबार अवधिमा न्युट्रल जोन (४३ दशमलव ३८ स्केल)मा छ । खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : बैङ्कको ६२ दिनको कारोबार अवधिमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन शून्य दशमलव ७४ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखीम हुन्छ भने लाभ पनि कम हुने गर्छ ।
मुभिङ एभरेज : बैङ्कको ६२ दिनको कारोबार अवधिमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग नजिकिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने र २६ दिने औसत मूल्यरेखाभन्दा तल छ । आइतवारको शेयरमूल्य रू. १ सय ४७ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. १ सय ४८ मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. १ सय ४४ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
सिभिल बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ११ पुस २०७५)
सिभिल बैङ्क : मैनबत्ती विश्लेषण (आइतवार, १७ भदौ २०७५)
१७ भाद्र २०७५, आईतवार १०:२०
सिभिल बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण:
१० भाद्र २०७५, आईतवार १८:२४
सिभिलको चुक्तापूँजी ३४.९८% बढ्यो
३० श्रावण २०७५, बुधबार ११:४७
पाकिस्तानमा विदेशी लगानी घट्यो
बनेर नसकिदै भत्कन थाल्यो पक्की पुल
वाशिंगटनमा फेरि शुरु हुँदैछ अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता
प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा खानेपानी सचिव ठाकुरको सरुवा